Iintyatyambo zolonwabo lwabesetyhini: imithetho yokunyamekela, ukubaluleka kwezityalo.
Intyatyambo yolonwabo lwabesetyhini, inzululwazi ye-spathiphyllum, ibhekisela kwizityalo ezingapheliyo zeentsapho ze-aroids kwaye zikhula kwiindawo ezifudumele ezitshisayo. Igama layo elithandwayo alikho nto, kuba imiqondiso emininzi ibonisa ukuba izityalo ezinjalo endlwini zenza ukuba abameli bobulili abalungileyo bafumane uthando kwiminyaka emininzi. Ngokuphathelele imithetho yokunyamekelwa kweentyatyambo, siza kuxubusha kweli nqaku.
Indlela yokukhulisa i ntyatyambokazi yolonwabo
Ukuze isityalo sakho sikhule, sihlakulele kwaye siqhakaze kakuhle, landela ezinye iingcebiso ezilula:
Njengoko le nkcubeko yafika kuthi kumazwe ashushu, iyakuthanda imozulu yomshushu. Ungakulibali ukululela umhlaba rhoqo ebhodweni uze ufefe amaqabunga, kodwa qiniseka ukuba amanzi azinzi ixesha elide.
Inkqubo yokukhula kwe-spathiphyll ivela ngokukhawuleza ngokwaneleyo, ngaphezu koko, iyakhukhula, kwanaxa kuhamba iiyure ezifutshane. Nangona kunjalo, ukuba intyatyambo yakho ayiyikukhulula iifom, isizathu sinokuba yimbi.
Ukutshintshela isityalo xa iingcambu zizalisa ngokupheleleyo isitya apho inkcubeko ikhona khona.
Yenza le nyathelo ibe ngcono entwasahlobo, kunye nomhlaba ekubunjweni kwayo kufuneka kukhethwe i-asidi engenamandla: amaqabunga, i-turf, ne-peat, humus nesihlabathi. Ungongeza kwizitena okanye kwilahle.
Xa ukhetha indawo ofuna ukuyifumana ngayo ulonwabo lwenkwenkwezi, khetha ukukhanya okanye ikhonkco elincinci.
Ubushushu obamkelekileyo bentyatyambo bubushushu obuphezulu-18-23 ° C. Kwiqondo lokushisa ngaphaya kwe-20 ° C, isityalo siphuhlisa ngokukhawuleza.
Zama ukunyamezela i-spathiphyllum kwi-balcony, ukhetha ukufudumala kwekhaya kunye nokungabikho kwemifanekiso.
Ukuze isityalo siqhamle amaxesha amaninzi, musa ukulibala ngokucoca ngokucoca rhoqo ngamachumbo e-mineral, ngexesha lekwindla-ebusika, kukhetha oko kanye ngeveki. Kwixesha elifudumeleyo, isityalo sinokuchumiswa ngaphezu kwesinye ngenyanga.
Amaqabunga aphelile okanye aphuzi abonisa ukunyuka okwaneleyo kwentyatyambo. Qaphela ukuba iingcambu zaso azime, ngenxa yoko unako ukuhambisa amanzi ngexesha elilodwa.
Ulonwaba lwesifazana luvame ukuvelisa izityalo, kwiimeko ezinqabileyo - imbewu
Ixabiso le-spathiphyllum kunye nemiqondiso ehambelana nayo
Abantu baye baqaphela ixesha elide ukukwazi ukwenza ezinye izityalo ukuba zithintele ubomi bomntu: kutsala imali, inhlanhla, impilo, kwaye kwezinye iimeko zenza kakubi kwaye zonakalise. Kuthatha ixesha elide ukuba intyatyambo ye-spathiphyll ithathwa njengabaphathi bebhinqa, ekuncedeni ekutsaleni uthando nobudlelwane bomtshato obonwabileyo. Ukuba ukholwa impawu, abaninzi abameli bezesondo ezifanelekileyo kunye nokubonakala kwenkcubeko endlini bafumana isiluleko esilinde ixesha elide esilindelweyo, kunye nentliziyo, bafumana ulonwabo emtshatweni, kwaye abanye banokuba nomntwana emva kweminyaka emininzi yokungaphumeleli.
Ukuba awukwazanga ukuseka ubomi obuntwini ixesha elide, ukhathele ukukhangela uthando lwakho kwaye wehla izandla emva kokusilela okukhulu kule ntsimi, ungadikibali. Thenga okanye ucele isityalo siproifillum isipho, ukhethe ibhokhwe enhle kwaye ubeke kwindawo yendlu apho intyatyambo iya kuziva ikhululekile. Uthando, unakekele kwaye ulondoloze isityalo, amanzi rhoqo, ufefe uze uphonte amaqabunga ayo uze ufumane umququzeleli. Musa ukulibala ukuba izityalo ezinokuthi zixoxwe. Qhagamshelana nentyatyambo yakho ngoncedo lwenkulumo ngomlomo okanye nangengqondo. Kodwa kubaluleke kakhulu - kholelwa kwimpumelelo. Iingcamango ezijoliswe kwisiphumo esihle ziza kuzaliseka.
Indlela yokwenza umntwana alele ixesha elide?
Isaladi "Prefab" kunye nokugqoka isardadi
Ezempilo kunye nobuhle - iinkqubo ezifanelekileyo ze-salon
Indlela yokucoca i-Facial Face Pores
Ingqondo yezingane, ubuhlobo phakathi kwabantwana
Izizathu ezilishumi zokungabi nciphisa umzimba
Izixhobo zeMfashini, iAntumn-yeHlabathi 2015-2016, ifoto